Wasiir Waayeel: Xitaa Ahlu Sunna markii ay joogtay Shabaabku way soo weerarayeen magaalooyinka | Dhacdo
Wasiir Waayeel: Xitaa Ahlu Sunna markii ay joogtay Shabaabku way soo weerarayeen magaalooyinka
Wasiirka Arrimaha Gudaha Galmudug, Cabdi Maxamed Jaamac (Cabdi Waayeel) ayaa ka hadlay hawlgalka uu maamulkaasi qorsheynayo in uu ka bilaabo Gobolada Dhexe ee ka dhanka ah maleeshiyada Al Shabaab.
Tani ayaa waxay ka dambeysay ka dib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada iyo weerarada ay maleeshiyada Al Shabaab ka gaysanayaan deegaanada Galmudug.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa sheegay in Shabaabku ay horeyba u jooggeen qaybo ka mida Gobolada Dhexe, balse ay muddooyinkan dambe bilaabeen inay weeraro ka gaystaan deegaanadii kale ee Galmudug gacanta ku haysay. Meelaha qaarkood ayuu sheegay in iyagoo min toban nin u socda ay soo galaan, sababtuna ay tahay dhulkaasi oo ah mid furan, sida uu yiri.
Wasiirka oo la hadlay BBC ayaa sheegay in Dowladda Federaalka iyo Galmudug oo iskaashanaya in ay ciidamo badan geeyeen deegaanadaasi, hawlgalkuna uu yahay mid deegaanadaasi looga sifeynayo maleeshiyada Shabaabka.
Mar la weydiiyay waxa ay Galmudug uga gaabisay amniga deegaanadaasi ayuu tilmaamay in Galmudug iyo hoggaankeeduba ay ku mashquuleen dhexdhexaadinta dhinacyada siyaasadda ee dalka, iminkana aysan cabsi weyn ka qabin dhanka Shabaabka, diyaarna ay u yihiin in laga xoreeyo deegaanada Galmudug.
Su’aal ahayd waxa keenay amni-darrada xilligan ku soo korortay Galmudug, oo xilligii Ahlu Sunnada aan uga jirin Gobolada Dhexe ayaa sheegay in xitaa markii Ahlu Sunna ay joogtay, ay Shabaabku soo weerari jireen magaalooyinka.
“Runtii markii ay jooggeen qolooyinkii Ahlu Sunna xitaa Dhuusamareeb bay soo weerarayeen waad ogtihiin, Guriceel way soo weerarayeen dhibaato badan baa leeskugu gaystay, Dhuusamareeb lafteedu shan jeer bay soo weerareen. Markasta markii ay saas u jabaan dib bay haddana isu soo qorsheeyaan.” Ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa intaa ku daray “Amniga aan ka hadleynaa kaa maaha oo waa mid ka ballaaran, oo ah in deganaanshihii degmooyinka, tuulooyinka iyo meelaha xuduudda ay kala leeyihiin Shabaabku oo wax is bedelay inaanay jirin runtii ama meel ay qabsadeen. Meelaha dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacayeen waad ogtihiinoo Bacaadweyne ayay ahaayeen, shacabka halkaa degan, Galmudug iyo Dowladda Federaalka ciidamadeeda khasaaraha ay u gaysteen iyo in marnaba ay soo geli waayeen.”